Vhiki rapera, Lenovo akaunza iyo ThinkPad P1 Gen 4. Kana iwe wanga uchitevera pamwe, saka iwe waiziva iyo ThinkPad X1 Yakanyanya Gen 4 yaive munzira. Icho chikonzero ndechekuti ivo, uye vagara vari, iyo chaiyo yakafanana laptop. Ingori yekuti imwe inouya neIntel Xeon uye Quadro mifananidzo, nepo imwe ichiuya neIntel Core neGeForce mifananidzo.
Iyo Lenovo ThinkPad X1 Yakanyanyisa Gen 4 chikara. Iyo X1 Yakanyanya yakagadzirirwa kuti ive yekutanga premium ThinkPad ine hombe 15.6-inch skrini, ine yakatsaurwa mifananidzo, uye ine 45W processor. Nekudaro, iwo magiraidhi aive akaganhurirwa nechimwe chinhu senge NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. Nechizvarwa chino, unogona kuchiwana pamwe kusvika kune RTX 3080.
Sezvaungatarisira, inouya ne11th-gen 45W Intel processor, asi zvese zvakagadzirwazve. Iyo skrini ndeye 16 inches ine 16:10 factor ratio ikozvino, uye ingori 17.7mm yakatetepa.
Zvinhu zvaifanirwa kuongororwa kuti izvi zvishande. Iwo matembiricha aifanira kutsiva kuve mutete, uye nekuve nevane simba mukati vevadzidzi kupfuura nakare kose. Lenovo ari kutora dhizaini kubva kuchikwata cheLegion uye anoyamwa mweya mukati kuburikidza nekhibhodi, achisundidzira kunze nemhepo. Izvi zvinobvumidza kumwe kuyerera kwemweya, asi dambudziko raturwa izvozvi nderekuti chigadzirwa hachizove semvura isingadzivirire sezvazvaive, uye ese maPickPads anofanira kupfuura gumi nemaviri MIL-STD-810G bvunzo. Saka, kune iyo ThinkPad X1 Gen 4, kune zvisimbiso mukati kudzivirira zvikamu.
Iyo Lenovo ThinkPad X1 Yakanyanyisa Gen 4 iri kuuya muna Nyamavhuvhu, kutanga pamadhora 2,149.
Izvo hazvisi izvo zvese izvo zvitsva kubva kumhuri yeFungaPad. Iyo kambani iri kuunza iyo ThinkPad L13 uye L13 Yoga Gen 2. Iyo nyowani malaptops inorongedza AMD Ryzen 5000 processor, kusanganisira sarudzo dzePRO. Izvo zviri kuuyawo muna Nyamavhuvhu, kutanga pa $ 799 yeiyo clamshell uye $ 999 yeinoshandurwa.
Tine zvakare mamwe anotakurika monitors, seiyo ThinkVision M15, 15-inch FHD inotakurika yekutarisa iri kuuya muna Nyamavhuvhu ye $ 219. Kune zvakare 24-inch ThinkVision T24m-20 yekutarisa ye $ 299, uye nyowani ThinkVision MC50 Monitor Webcam ye $ 99.
Asi iwe unogona kucherechedza kuti haazi ese emidziyo mumufananidzo uri pamusoro akapihwa zita rekuti ThinkVision, uye izvo zvinotipinza muzviziviso zvevatengi. Padivi peiyo ThinkVision M15 ndiyo Lenovo L15, chigadzirwa chakafanana che $ 229 iri kuuya munaGunyana. Saizvozvowo, kune iyo LC50 Monitor Webcam ye $ 79.99. Kune maviri matsva vatengi monitors, iyo 27-inch FHD 75Hz L27m-30 Monitor ye $ 229.99 uye iyo 4K L32p-30 Monitor ye $ 449.99.
Zvakare kune vatengi ma Chromebook matsva. Kunyanya, iyo Lenovo 5i-14 Chromebook uye iyo Lenovo Flex 5i-13 Chromebook, iyo yekupedzisira iyo inouya mune yakanakisa Gomba rakadzika reBlue. Vanouya pamwe chete ne11th-gen Intel Core i5 uye inosvika ku512GB SSD. Pamwe pamwe neaya ari FHD skrini, Wi-Fi 6, zvichingodaro. Ivo vakaonda uye vakareruka zvakare; iyo Flex 5i inouya iri pasi pemapaundi matatu.
Iyo Lenovo 5i-14 Chromebook uye Flex 5i-13 Chromebook iri kuuya muna Chikunguru naJune, zvichiteerana, kutanga pa $ 439.99.
The post Lenovo nyowani ThinkPad X1 Yakanyanyisa Gen 4 chikara yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Lenovo ThinkPad X1 Nano Ongororo: Kupenga mwenje, asi zvakare kupenga kwakanaka
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 vs ThinkPad X1 Carbon Gen 10: Ndeipi yekutenga?
Lenovo ThinkPad X1 Yoga OLED ongororo: Inokwezva $ 250 kusimudzira
Lenovo FungaPad X1 Yoga Gen 7: Zuva rekuburitsa, mutengo, uye zvimwe zvese